डा. दुर्गा थापा पहिलो महिला एआइजी - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
डा. दुर्गा थापा पहिलो महिला एआइजी
स्थापनाको ६३ वर्षपछि नेपाल प्रहरीमा महिला पहिलोपटक विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन् । प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत डा. दुर्गा थापा पहिलो महिला एआइजी बनेकी हुन्।
डा. थापालाई मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका छन् । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । एआइजीका रूपमा अब उनीले प्रहरी अस्पतालको प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नेछिन् ।
यसअघि नेपाल प्रहरीमा डिआइजी पदसम्म मात्र महिला पुगेका थिए । पार्वती थापा र विमला थापा सात वर्षअघि डिआइजीमा बढुवा भएका थिए । उनीहरूको अवकाश सोही पदबाटै भएको थियो । उनीहरूलाई विशेष पद सिर्जना गरेर डिआइजी बनाइएको थियो ।
एआइजीमा पदोन्नति भएकी थापा दन्त चिकित्सक हुन् । दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरेपछि उनले अस्पताललाई आधुनिक र अनुशासित बनाउँदै तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइन्। नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
Trending Now : 'क्यालकुलेटर' म्युजिक भिडियोमा भद्रगोलको टिम